महिला र पुरुषमा यौ'न इच्छा जगाउने अवस्था फरक हुन्छ : करुणा कुँवर - News 88 Post
महिला र पुरुषमा यौ’न इच्छा जगाउने अवस्था फरक हुन्छ : करुणा कुँवर
Health Tips राष्टिय समाज
November 28, 2021 N88LeaveaComment on महिला र पुरुषमा यौ’न इच्छा जगाउने अवस्था फरक हुन्छ : करुणा कुँवर
हिजोआज नेपाली दम्पतीहरू यौ’न वि’चलनका कारण सम्बन्धवि’च्छेदको अवस्थासम्म पुग्ने गरेका छन् । दम्पतीमा हुने गलत बुझाइ वा यौ’नमा हुने असन्तुष्टिको कारणले पनि धेरै दम्पतीको वि’ग्र’ह भएको देखिन्छ । यही यौ’नको जीवन र यसले निम्त्याउने समस्याको बारेमा मनोविद् करुणा कुँवर विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मान्छेको यौ’न रूचिमा मौसमको कुनै प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन ? अर्थात्, जाडो महिना र गर्मी महिनाले यौ’न इच्छामा कुनै परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ?
अवश्य पनि हुन्छ । मान्छेको यौ’न व्यवहारलाई मौसमले असर गर्छ । मान्छेको यौ’न आकांक्षालाई भौगोलिक अवस्था र वातावरणले निर्देशित गरेको हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ कि हरदम चिसो भइरहने, पानी परिरहने ठाउँमा पुग्दा मान्छेमा यौ’नको मुड चल्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पनि फरक फरक वातावरणमा भिन्दाभिन्दै खाले यौ’नइच्छा जागृत गराउने गर्छ । लामो समय बादल लागिरहने र पानी परिरहने ठाउँमा पनि यौ’न इच्छा बढी जागृत हुन्छ ।
जनावरको यौ’न व्यवहार हेर्दा उनीहरू कुनै निश्चित समयमा मात्र यौ’न भो’ग गर्छन्, त्यस्तो मान्छेमा पनि हुन्छ ?
जनावरमा जस्तै निश्चित समयमा मात्रै यौ’न भोगको इच्छा मान्छेमा हुँदैन । मान्छेमध्ये पनि पुरुषहरूमा प्राकृतिक रूपमा सधैंभरि यौ’न इच्छा जागृत हुन्छ । तर, महिलाहरूमा महिनावारी भएपछि १५ दिनसम्म बढी यौ’न इच्छा जाग्छ । महिला र पुरुषमा यौ’न इच्छा जगाउने अवस्था फरक–फरक हुन सक्छ ।
नेपाली दम्पती आफ्ना यौ’न जीवनबाट कति सन्तुष्ट होलान् ? यसबारे कुनै खोज अध्ययन भएको छ ?
व्यवस्थित रुपमा त्यस्तो खोजी भएको त छैन । तर विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्या लिएर आउनेहरुले सुनाएको समस्यालाई विश्लेषण गर्दा गलत बुझाइ र अलिअलि यौ’न अ’सन्तुष्टि भेटिए पनि त्यसको स्थिति धेरै भने छैन । सामाजिक सांस्कृतिक कारणले गर्दा यौ’नमा पूर्ण स’न्तुष्टि लिन नसकेका कुरा आए पनि एक अर्काको कारणले यौ’न अ’सन्तुष्टि भएको घ’ट’ना भने धेरै छैन ।
प्रायः नेपाली दम्पतीको कलह शयन कक्ष अर्थात् ओछ्यानबाट हुन्छ भनिन्छ, के यो सत्य हो ?
यो सत्य हो । तर सबै कलहलाई यौ’नसँग त जोड्न नसकिएला । दुई जनाको व्यवहार बारे हुने बुझाइ, एक अर्काेको सोच र रोजाइ आदिमा हुने फरकपन पनि कलहको कारण बन्ने गर्छ । मनोवैज्ञानिक परामर्शको लागि आउने महिलाहरुमध्ये कतिपयले आफ्नो घरायसी कलहको कारण अरू बताए पनि गहिरिएर कुरा गर्दै जाँदा यसको कारणमा कतै न कतै यौ’न जोडिएको पाइन्छ । महिलाको र पुरुषको बीचमा यौ’नका बारेमा बुझाइ फरक हुन्छ । त्यही फरकपनाले स’मस्या बढाउँछ ।
अक्सर महिलाहरू यौ’नका लागि अग्रसर हुँदैनन् र आफ्नो इच्छा पनि जाहेर गर्दैनन् । तुलनात्मक रूपमा पुरुष सरह उनीहरूमा यौ’न रूचि हुँदैन ?
महिलामा यौ’न रूचि कम हुन्छ भन्ने त होइन । यो मान्छेपिच्छे फरक हुने कुरा हो । हरेक व्यवहारहरु पुरुष र महिलामा यस्तै पाइन्छ भन्ने हुँदैन । जुन मान्छे अनुसार व्यवहार फरक हुने गर्छ । जुनसुकै मान्छेको पनि सानैदेखि मौलिक बुझाइ शैली हुन्छ । त्यही शैलीले पनि यौ’न रुचि कस्तो हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।
कतिपय विवाहित पुरुषहरु एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरमा हुन्छन्, के उनीहरु आफ्ना श्रीमतीबाट सन्तुष्ट भएका हुँदैनन् होला ?
यस्तो होइन, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरमा लागेका सबै केटाहरु यौ’नका कारण नै अरू महिलासँग आकर्षित हुन्छन् भन्न मिल्दैन । यसमा केटामान्छेले आफ्नी श्रीमतीबाट कस्तो व्यवहार खोजीरहेको छ त्यो श्रीमतीबाट नपाएर पनि अर्की महिलासँग नजिकिएको हुन सक्छ । भावनात्मक सम्बन्ध होस् या अरू आवश्यकता पूर्तिको लागि पनि पुरुषहरुले एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरमा लागेका हुन्छन् ।
अहिलेको व्यस्त दैनिकीमा दम्पतीहरु यौ’नसुखबाट विमुख त भएका छैनन् ?
त्यसबारेमा अध्ययन भएको छैन । त्यसैले सिधा भन्न त कठिन हुन्छ । तर विगतका ५ वर्षमा आएका यस्ता घटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलनले गर्दा दम्पतीमा यौ’नसुख लिन नसकेको कुरा भने यथार्थ हो । यसबाहेक धेरै अध्ययन भएको छैन ।
एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को ? ओलीलाई नेम्वाङले दिए तीन विकल्प
अध्यक्ष मण्डलको बैठक सुरु, सबैमा सहमति जुट्यो
कसका घरमा यसरी खाना खाँदैछन् प्रचण्ड (फाेटाे फिचर)
March 24, 2022 N88
लोक सेवाको परीक्षामा ३५ पटक फेल भएपछि…
August 24, 2021 N88
अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा बाँदरझुलावासीसँग तीन बुँदे सहमति
December 21, 2021 N88